होम क्‍वारेन्टिनमा बसेका ८ जनालाई को’रोना देखिएपछि एक हप्ताका लागि फेरी लकडाउन !! – Sanchar Patrika
होम क्‍वारेन्टिनमा बसेका ८ जनालाई को’रोना देखिएपछि एक हप्ताका लागि फेरी लकडाउन !!
July 17, 2020 156
होम क्‍वारेन्टिनमा बसेका ८ जनालाई को’रोना सं’क्रमण भएपछि गैंडाकोट नगरपालिका सिल गरिएको छ । थप एकजनालाई पनि को’रोना सं’क्रमण देखिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा रहेका पाँच जना प्रहरीमा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालय पनि सिल गरी अन्यत्रबाट प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आज जरुरी सूचना जारी गर्दै साउन २ गते शुक्रबारबाट साउन ८ गतेसम्मलाई नगर क्षेत्र पूर्णतया बन्द गरिएको जनाएको हो । गैंडाकोटमा बिहीबार १४ जनालाई को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले एक सातासम्म नगरपालिका पुरै सिल गरी सं’क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पनि परीक्षण गर्ने गरी नगरपालिका सिल गरिएको बताए । शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी गैंडाकोटमा नगरपालिका क्षेत्रभरी आवतजावतमा निषेध गरिने छ ।
Prevटिकटकमा रमाइलो भिडियो राख्ने शर्मिलाको रू’हाउने कथा:श्रीमानले पनि बीच बाटोमै छाडे, [भिडियो सहित]
Nextतीतो तितेपातीका मिठा गुण, थाहा पाउनुहोस् किन खाने तितेपाती
धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ! लामो समय मास्क लगाउँदा मृ-त्यु सम्मको खतरा हुन सक्छ, जानिराखाैँ यसका असरहरु,
O M G <<< लकडाउनको मौका छोपी काठमाडौं मा घट्यो डरलाग्दो घटना